Cloud base POS System တွေကို ဘာကြောင့် အသုံးပြုသင့်သလဲ။ | PRO-X Software Solution
ပြောင်းလဲလာသော နည်းပညာများနှင့်အတူ အသစ်သစ်သော စွမ်းဆောင်ချက်တွေကြောင့် လုပ်ငန်း၏ အကျိုးစီးပွားများကို ပိုမို အထောက်အကူပြုရန်အတွက် ဘယ်လို POS System တွေကို အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကလည်း လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် စဉ်းစားဖို့ လိုအပ်လာပါသည်။ POS System အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲကမှာ ဘာကြောင့် Cloud base POS System မျိုးကို ရွေးချယ်ပြီး အသုံးပြုသင့်သလဲ ဆိုရင်တော့ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်တွေကြောင့်လို့ပဲ ဖြေရမှာပါ။
Cloud base POS system တွေကို Browser အသုံးပြုလို့ ရသည့် မည်သည့် Devices များကမဆို ဝင်ရောက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Phone or Tablet များဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် အလုပ်ထဲမှာ ရှိနေမှ မဟုတ်ပဲ အိမ်မှဖြစ်စေ၊ အပြင်မှာ ရောက်နေသည် ဖြစ်စေ လုပ်ငန်း၏ အချက်အလက်များ နှင့် Reporting များကို ကြည့်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
အိမ်မှာနေပြီးတော့ မိမိလုပ်ငန်းတွေကို စီမံခန့်နိုင်သလို၊ ဆိုင်ထဲကနေလည်း စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကို ပြုလုပ်နိုင်မည်လဲ ဖြစ်သည်။ Portable Devices တွေနဲ့ သွားလေရာ သယ်ပြီးတော့ ရောင်းချမှုမျိုးကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဖြင့်လည်း မိမိလုပ်ငန်း၏ Customer များကို ဝန်ဆောင်မှု မြှင့်တင်ပေးပြီးလည်း ဖြစ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
အရောင်းစာရင်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိရှိပြီး ဖြစ်နေပါမည်။ Cloud base ဖြစ်တဲ့အတွက် Data တွေ မပေါင်းရသေးတာ၊ ဆိုင်ခွဲဆီက စာရင်းတွေ မရသေးတာ စသည့် ခေါင်းရှုပ်စရာ ကိစ္စတွေကို စိတ်ပူစရာလည်း မလိုတော့ဘူးပေါ့။
Cloud base POS system ဖြစ်သည့်အတွက် Data တွေက အမြဲ Online မှာ ရှိနေမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သီးသန့် backed up ပြုလုပ်တာမျိုး နှင့် စက်ပျက်တာ၊ စက်အသစ်လဲတာတို့ အတွက် စိတ်ပူနေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
5. No High Costs
Cloud base POS system ပြောင်းသုံးမယ်ဆိုရင် လက်ရှိရှိပြီးသား Device များပေါ်တွင် အလွယ်အကူ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ စျေးနှုန်းမြင့်မားသော Devices များ အသုံးပြုရန်မလိုအပ်ခြင်း (Computer & Devices များတွင် စျေးနှုန်းခြွေတာ နိုင်ခြင်း) တို့အပြင် လစဉ် (သို့) နှစ်စဉ် ဖြင့် ပေးနိုင်သောကြောင့် ငွေအလုံးအရင်း အသုံးပြုရန် မလိုအပ်ခြင်းတို့ကြောင့် လုပ်ငန်း၏ အမြတ်ကို ထိခိုက်မှုမရှိခြင်း စသည် အားသာချက်များ၏ အကျိုးကို ခံစားရပါမည်။
6. Latest Trend
အပြိုင်အဆိုင်တွေများတဲ့ စီးပွားရေးခေတ်ကာလကြီးမှာ မိမိလုပ်ငန်းက ခေတ်နှင့်အညီ စျေးကွက်မှာ တိုးနိုင်ဖို့ အတွက် အလွန် အရေးကြီး ပါသည်။ ဒီလို ယှဉ်ပြိုင်မှုမျိုးမှာ မိမိလုပ်ငန်းက ခေတ်နောက်ကျန်မနေခဲ့ဖို့ အတွက် လုပ်ငန်းမှာ အသုံးပြုတဲ့ POS system တွေကလည်း ခေတ်နှင့်အညီ ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Customer care အနေဖြင့် Gift Card, Award Point တွေ အသုံးပြုလာချိန်မှာ ကိုယ်ဆိုင်ကလည်း ဒါမျိုးကို support လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါသည်။ Cloud base POS system တွေမှာ ခေတ်နှင့်အညီ အသစ်သစ်သော Features တွေကို အလွယ်အကူ ထည့်သွင်းနိုင်သော အားသာချက်များလည်း ရှိနေပြန်ပါသည်။
Cloud base POS system တွေရဲ့ အားသာချက်တွေကို သိရှိပြီးတော့ မိမိဆိုင်အတွက် အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လို POS system မျိုးကို ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာကလည်း စဉ်းစားဖို့လို အပ်လာပါပြီ။
အသုံးဝင်သော functions တွေပါရမယ်၊ အမြဲ upgrade လုပ်ပေးနေတဲ့ POS လည်း ဖြစ်ဖို့လိုမယ်၊ လုပ်ငန်းတိုင်းက အကြွေးတော့ မကင်းတက်ကြတော့ အကြွေး ဝယ်/ရောင်း စတာတွေလည်း ပါရမယ်၊ Customer care အနေနဲ့ Gift card, Point system စတာတွေပါရမယ်၊ လုပ်ငန်း၏ အရှုံးအမြတ်တွေ နဲ့ အသုံးစရိတ်တွေလည်း ပါတာမျိုး ဖြစ်ရမည်အပြင် စျေးနှုန်းကလည်း သင့်တင့် မျှတ ဖို့လည်း လိုအပ်တာပေါ့နော် 🙂
ထိုအချက်အလက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Cloud base POS system ကတော့ PRO POS ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ချက်တွေ အကုန်ပြည့်စုံသည့်အပြင် စျေးနှုန်းကလည်း 1Store package ကို လစဉ်ကြေး ၃ သောင်း မှ စတင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Demo လည်း Free ပေးသုံးထားတော့၊ ကိုယ်ကြိုက်တယ်ဆိုမှ Package ဝယ်သုံးလိုက်ယုံပါပဲ။ မရှင်းတာရှိရင်လည်း User Guide မှာ ဖတ်ကြည့်လို့ ရသလို၊ Chat box ကနေ အကုန်သွားမေးလို့လည်း ရတယ်နော်👌
Demo >> https://shop.proxpos.com
User Guide >> http://tiny.cc/propos_ebook
☎️ 09778915075 , 09698507878 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။